Oromiyaa Keessatti barattoota Oromoo sadii poolisiidhana ajjeefamuun amaname
Jeequmsa tibbana aanaalee fi dhaabbilee barnootaa tokko tokko keessaatti uumameen lubbuu namootaarra miidhaan qaqqabuu poolisiin ibse
Finfinnee: Sadaasa 23, 2008 (FBC) Tibbana jeequmsa naannoo Oromiyaa aanaalee tokko tokkoo fi dhaabbilee barnoota ol’aanoo lamaarratti mudatee ture tasgabbaa’uusaa Komishiniin Poolisii Oromiyaa beeksise.
Manneen barnootaa sababa kanaan hojii dhaabanii turanis akka gara hojii baruufi barsiisuutti deebi’an ta’aa jira jedhameera.
Jeequmsichaanis namoota du’aniifi miidhamani irra ga’eef Koomishinichi akka gaddedha komishinarri komoshinii poolisii oromiyaa Ibraahim Hajii ibsa har’a miidiyaadhaaf kennaniin kan himan.
Gaddi kunis kan ibsame jeequmsa tibbanaa naannoo Oromiyaatti godinaalee adda addaa keessatti uumame hordofee ibsa Koomishiniin Poolisii Oromiyaa kenneeni.
Sababii rakkoo nageenyaa uumame kanaa jechuun kan himames gaaffii pilaaniin qindaa’aan magaalaa Finfinneefi magaalota naannaa isheef qophaa’e isa hangafadha.
Komishinarri Koomishinii Poolisii Oromiyaa Ibraahim Hajii dhimma waqtiidhaarratti ibsa laataniin jeequmsi kuni dhaabbilee barnoota ol’aanoo Naannoo Oromiyaa keessaa lama Yuuniversiitii Haroomaayaa fi madda walaabuuu akkasumas aanaalee oromiyaa 10 keessatti mudatee akka ture himaniiru.
Jeequmsa kana dhaabudhaafis qaamoleen nageenyaa keessumaa poolisiin uummata naannaa jeequmsi mudatee kana waliin qindoomudhaan tasgabbeessuuf yaalera jedhan komishinar Ibraahim.
Sababa jeequmsaa kanaan barattoonni sadii madaa’aniiruu ibsa kanaan kan himamedha.Gama qaama nageenyaa keessaa poolisoonni ja’a madaa’udha kan dubbatame.Iddoowwan jeequmsaa keessaa Godina Wallagga Lixaa aanaa Gullisoofi Godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Toleetti barattoonni 3, du’an jiraachuu komishinar Ibraahim himaniiru.
Miidhaa qabeenyaafi namarra ga’e kanaafimmoo komishinichi gaddi guddaan akka itti dhaga’amedha kan himan.Kan Yuunivarsiitota lameen keessatti mudate Yuunivarsiitii Haromyaafi Yuunivarsiitii madda Walaabuutti miidhamni du’aatii akka hin mudanedha kan himamee jiru.
Sab-qunnamtiileen hawaasaas ta’anii elektirooniksii Yuunivarsiitii Haromaayaatti barattoonni sadii du’aniiruu haasa’amu akka hin jirre Komishinara koomishinii Poolisii Oromiyaa Ibraahim Hajii irraa dhageenyeerra.
Jeequmsa uumame kana tasgabbeessuu keessatti poolisiin dirqama itti kennamu yeroo ba’atutti tarkaanfiin fudhate humnaa olii mitii kan jedhu gaaffii ka’udha.Komishinichi ibsa isaatiin tarkaanfiin tasgabbeessaaf fudhatame madaalawaa ture,garuu iddoon humnaa ol dhiibbaa uumes jiraa hima.Sunimmoo qorannoon adda ba’aa jedhaniiru.
Iddoowwan jeequmsi uumametti barattoota itti hirmaatan hubannoo kennuufii malee manneen amala sirreessaa tursiisuuf hin barbaadamu kan jedhan komishinarichi,kanneen ka’umsa jeequmsaa keessatti hirmaatan ammallee gama seeraa isa sirriidhaan gaafatamuun itti fufa jedhan.
Yeroo ammaa iddoo tasgabbiin itti dhabamee ture furmaata argachaa jiraa kan himan komishinar Ibraahim barattootas ta’ee qaamolee hawaasaa biroo gaaffii kaasaniif deebiin kallattii sirriin akka kennnamuufi hubannoo ga’aan kennamuufiinis cimee itti fufa.
Manneen barnootaa hojii dhaabanis muraasa isaanii malee garri caalu hojii baruufi barsiisuu eegalaniiru jedhani. Haalli jeequmsaas amma tasgabbaa’ee akka jirudha komishinarichi kan himan; Geetaachoo Mul’ataatu gabaase.
FE’uu: Maarituu Galaalchaa
Previous Previous post: በኦሮሚያ ክልል በአንዳንድ የትምህርት ተቋማት በተከሰተው ሁከት የ ሶስት ሰዎች ህይወት ማለፉን ፖሊስ ገለፀ
Next Next post: Three died due to violence in Oromia educational institutions: Police